Ka Aka.ms/RemoteConnect】Minecraft रिमोट कनेक्ट / Microsoft Minecraft फिक्स मुद्दा
फेब्रुअरी 4, 2021 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
हालसालै हरेक Minecraft प्लेयर सामना गरिरहेको छ https://Aka.ms/remoteconnect problem when they log in. त्यसो भए, here I am withasolution to the Minecraft Remote-Connect error. यहाँ म वर्णन गर्न कोशिस गर्दैछु “टाढाको कनेक्ट त्रुटि के हो?” र “तपाईं कसरी Minecraft रिमोट कनेक्ट मुद्दा ठीक गर्न सक्नुहुन्छ।”
को उर्फ.एमएस / रेमोटेक is also important for the Minecraft Players, Aka.ms रिमोट कनेक्ट प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो Minecraft खाता प्रत्येक उपकरणमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग छ भने. लोकप्रिय Minecraft खेल अनलाइनमा https //aka.ms/remoteconnect माइक्रोसफ्ट Minecraft मुद्दा. त्रुटि लिंक तपाईंको स्क्रिनमा आउँदछ.
Aka.ms/remoteconnect मूल रूपमा एक Minecraft बग हो, यस समस्याले तपाइँलाई देखाउँदछ जब तपाइँ Microsoft खाताको साथ तपाइँको Minecraft मा साइन इन गर्नुहुन्छ. जब तपाईं Minecraft को उपकरण स्विच, त्यसोभए तपाईले यो देख्नु भयो Aka.ms/remoteconnect त्रुटि. मुख्य रूपले व्यक्तिहरू निन्टेन्डोमा माइक्रोसफ्ट र अन्य कुनै पनि उपकरणहरूमा स्विच गर्दछ, त्यसो भए तपाईले सामना गर्नु Aka.ms/remoteconnect PS4 बाट अन्य कुनै पनि उपकरणहरूमा स्विच गरे जस्तै.
के हो https://aka.ms/remoteconnect त्रुटि?
Aka.ms/remoteconnect एउटा साधारण त्रुटि हो जब तपाईं आफ्नो Microsoft खातासँग खेल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ. Minecraft भर्खर माईक्रोसफ्टको प्लेटफर्ममा आएको छ. त्यसैले हामीलाई थाहा छ यदि त्यहाँ कुनै समस्या छ. यहाँ हामी कसरी समस्या समाधान गर्ने बारे कुरा गर्नेछौं. तपाईं Minecraft को उपकरण परिवर्तन गर्दा तपाईं यो समस्या सामना.
यो त्रुटि मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंलाई इन्फ्रेस। कोड / इन्टरफेस कोड प्रविष्ट गर्न भनियो. तर तपाइँलाई थाहा छैन तपाइँ कुन कोड प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ Aka.ms/remoteconnect को समाधान गर्नका लागि. छोटकरीमा, तपाइँलाई माइक्रोसफ्ट खाता चाहिन्छ यस Minecraft क्रसप्लेको अर्थ उर्फ.एमएस / रेमोटेक कनेक्ट छ.
यो Aka एमएस रिमोट कनेक्ट त्रुटि तपाइँको खेल डेटा बिगार्न सक्छ यसको मतलब यो छ कि तपाइँ तपाइँको Minecraft डाटा खाली गर्न सक्छ यो समस्या समाधान गर्न को लागी।. हामीलाई थाहा दिनुहोस् कसरी तपाईं क्रसप्ले त्रुटि ठीक गर्न सक्नुहुनेछ र टाढाको जडान त्रुटि ठीक गर्न तपाईंले तल दिइएको प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्नेछ.
कसरी Minecraft को क्रसप्ले त्रुटि ठीक गर्ने? | कसरी عرف.एमएस / रेमोटिक कनेक्ट त्रुटि ठीक गर्ने?
हामीलाई थाहा दिनुहोस् कसरी तपाईं क्रसप्ले त्रुटि ठीक गर्न सक्नुहुनेछ र टाढाको जडान त्रुटि ठीक गर्न तपाईंले तल दिइएको प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्नेछ.
0.1 कसरी लग ईन गर्ने & माईक्रोसफ्ट बाहिर, त्रुटिहरू ठीक गर्नुहोस्, गेमरट्याग परिवर्तन गर्नुहोस्:
1 । Aka.ms/remoteconnect Microsoft Minecraft】
1.1 कसरी Xbox क्रसप्ले त्रुटि समाधान गर्ने?
1.2 PS4 कसरी समाधान गर्ने (प्लेस्टेशन।) क्रसप्ले त्रुटि
1.3 तपाइँको माइक्रोसफ्ट खातालाई Minecraft PS4 र Xbox मा कसरी लि link्क गर्ने!
1.4 भिडियो ट्यूटोरियल,
1.5 मेरो साइटबाट अधिक
कसरी लग ईन गर्ने & माईक्रोसफ्ट बाहिर, त्रुटिहरू ठीक गर्नुहोस्, गेमरट्याग परिवर्तन गर्नुहोस्:
। Aka.ms/remoteconnect Microsoft Minecraft】
कसरी Xbox क्रसप्ले त्रुटि समाधान गर्ने?
टाढाबाट Minecraft खेल्नको लागि तपाईले पहिला Xbox मा Minecraft संस्करण डाउनलोड गर्नु पर्छ, त्यसोभए तपाईं Xbox कन्सोलमा Minecraft खेल्न सक्नुहुनेछ
चरण 1: Minecraft खेल प्लेयर तलको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईं टाढाको कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. मा क्लिक गर्नुहोस् Aka.ms/xboxsetup..
चरण 2: एक पटक खेल सुरु भएपछि तपाईंले माध्यमिक भ्रमण गर्नु पर्ने हुन्छ, वेबसाइटमा जानुहोस् र तपाइँले Microsoft खातामा लग इन गर्नुपर्नेछ, Minecraft मा रिमोट प्ले विकल्प पहुँच गर्न, त्यसोभए तपाईले कोड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ उर्फ.एमएस / रेमोटेक. तपाईंले Xbox स्क्रिनमा दिइएको रिमोट कोड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ.
यी टाढाको सुविधा सार्न र सञ्चालन गर्न कार्यात्मक चरणहरू हुन्. हामी आशा गर्दछौं कि यस वेबसाइटले तपाईंले सामना गरिरहेका केही मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ. माथिको दिएको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा माइक्रोसफ्ट माइनक्राफ्टको लागि काम गरिरहेको छ. अब थाहा दिनुहोस् “तपाइँ PS4 रिमोट प्लेमा कसरी क्रस प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।”
PS4 कसरी समाधान गर्ने (प्लेस्टेशन।) क्रसप्ले त्रुटि
दुबै प्रक्रियाहरू समान छन्. प्ले स्टेशनमा Minecraft रिमोट खेल्नको लागि तपाईंले समान कदमहरू उठ्नुपर्नेछ 4. र तपाईं उही उस्तै चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ.
चरण 1: सबै भन्दा पहिले, तपाईंले खोल्नु पर्ने छ निन्टेन्डो स्टोर, र तपाइँले Minecraft खेल खोज्नुपर्दछ र निन्टेन्डो स्टोरबाट Minecraft डाउनलोड गर्नुपर्नेछ.
चरण 2: Minecraft खेल खोल्नुहोस्.
चरण 3: यो पछि, भ्रमण गर्नुहोस् Aka.ms/remoteconnect आधिकारिक वेबसाइट, त्यसो भए Aka.ms/remoteconnect आधिकारिक वेबसाइटमा निन्टेन्डो स्क्रिनमा दिइएको कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्.
चरण 1: आधिकारिक भ्रमण गर्नुहोस् प्लेस्टेशन स्टोर र Minecraft खेल फेला पार्नुहोस्, त्यसो भए यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्.
चरण 2: यो पछि, तपाईंले PS4 मा Minecraft खेल खोल्नु पर्छ त्यसपछि तपाईं सक्रियता कोड देखाउनुहोस्.
चरण 3: अब तपाइँले भ्रमण गर्नुपर्नेछ Aka.ms/RemoteConnect आधिकारिक वेबसाइट र PS4 स्क्रिनमा दिइएको कोड टाढाको कनेक्ट वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्नुहोस्.
माथिको दिइएको प्रक्रिया अनुसरण गर्दै, तपाईं सजिलैसँग क्रसप्ले समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईं आफ्नो Minecraft खेल रमाईलो तनाव मुक्त. यदि Minecraft डाटा बिग्रेको छ, त्यसो भए, तपाईंले Minecraft भण्डारणबाट बिग्रिएको डाटा खाली गर्नुपर्नेछ. यदि तपाइँ Minecraft बिग्रिएको डाटा खाली कसरी गर्ने भनेर जान्नुहुन्न भने, त्यसो भए तपाईले तल दिइएको प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्दछ यसले तपाईलाई भ्रष्ट डाटा हटाउन मद्दत गर्दछ.
तपाइँको माइक्रोसफ्ट खातालाई Minecraft PS4 र Xbox मा कसरी लि link्क गर्ने!
हरेक समय नयाँ विधाहरू जुन काम गर्दछन्
कसरी Minecraft बाट बिग्रिएको मिति हटाउने?
Minecraft खेल खोल्नुहोस्, त्यसपछि Minecraft सेटिंग खोल्नुहोस्. यो पछि, प्रणाली सेटिंग मा क्लिक गर्नुहोस्. तेस पछि, भण्डारणमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि खेल भण्डारण खोल्नुहोस्, तपाईंले गर्नुपर्ने अन्तिम चरण भनेको खेल डाटा खाली गर्नु हो.
निष्कर्ष र सुझावहरू
जब तपाइँ Minecraft खाता स्विच गर्नुहोस्, त्यसो भए ध्यानपूर्वक यसको प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्. कहिलेकाँही मानिसहरू डराउँदछन् जब उनीहरूले यो पाए https://aka.ms/remoteconnect त्रुटि र उनीहरूलाई थाहा छैन “के गर्ने?”. त्यसो भए, यहाँ म Aka MS रिमोट कनेक्ट को सबै महत्वपूर्ण विवरण व्याख्या गर्दै छु.
पीसी विन्डोजको लागि Joox संगीत अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् 7/8/8.1/10 & म्याक
पीसीमा गुगल लेन्स अनुप्रयोग (विन्डोज 7, 8, 10, म्याक) नि: शुल्क डाउनलोड
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम सँग ट्याग गरिएको: Aka.ms/RemoteConnect, Microsoft Minecraft फिक्स मुद्दा, Minecraft लोकप्रिय खेलहरू, Minecraft रिमोट कनेक्ट